လူသားတွေဟာတစ်ထရီလီယံအနံ့ detect နိုင် - သတင်း Rule
လူသားတွေဟာတစ်ထရီလီယံအနံ့ detect နိုင်
အင်္ဂလိပ်: Nose diagram. (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
လူ့နှာခေါင်းအနည်းဆုံးထရီလီယံကွဲပြားခြားနားသောအနံ့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်, millions ပို previously estimated, US researchers said Thursday.
“Our analysis shows that the human capacity for discriminating smells is much larger than anyone anticipated, said study co-author Leslie Vosshall, ၏ဦးခေါင်းကို Rockefeller University‘s Laboratory of Neurogenetics and Behavior.
“We wanted people to pay attention to ‘here’s this really complex thing – can I pick another complex thing as being different?''”
ဤဆောင်ပါး, လူသားတွေဟာတစ်ထရီလီယံအနံ့ detect နိုင်: လေ့လာချက်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
22156	0 Andreas Keller, လူ့, Human nose, အမှေး, Olfaction, သုတေသန, Rockefeller University, Vosshall
← Intel ကမိတ်ဆက် Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Desktop ကိုကွန်ပျူတာ ဝီလျံနှင့်ကိတ်စပိန်ထိန်းငှားရမ်း →